Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Bilaha Ahaa Ee OYSU Ifo oo Sifiican Uqabsoomay.
Shirkii Bilaha Ahaa Ee OYSU Ifo oo Sifiican Uqabsoomay.
Posted by Dulmane	/ April 25, 2016
SHIRKII BILLAHA AHAA EE OYSU IFO OO MAANTA SIFIICAN UQABSOOMAY
Maanta oo ahayd maalin Axad ah taariikhduna kubegnayd 24/04/2016 waxaa xerada qoxootiga Ifo ee deegaanka Dhadhaab kadhacay shirkii billaha ahaa ee ururka OYSU faraciisa Miftaxul-Xorriyo ee kahawl gala xeradaasi Ifo.
Shirka oo ahaa mid si heer sare ah loosoo abaabulay ayaa furmay abaarihii 9:00am ee wakhtiga Dhadaab.
Waxaana kasoo qayb galay inta
badan xubnaha ururka OYSU Ifo iyo waliba xubno kale oo shirka lagu martiqaaday.
sidii caadada ahaydba shirka waxaa lagu furay ayaado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo aad iyo aad uqiimo badan oo uu soo jeediyay halgame Sheekh Cabdifatax oo kamid ah culimada Ogadenia wuxuuna sheekhu
Aad ugahadlay jihaadka iyo sadaqada oo lagu bixiyo halganka xaqa ah ee kasocda Ogadenia JWXO na hormuudka katahay asagoona udardaarmay xubnaha ALLA kacabsi iyo in ay halganka uyeeshaan Samir iyo dulqaad.
Sidoo kale waxaa lakalaqaatay warbixinno farabadan oo dhan walba taabanaya Waxaana sigaar ah looga warbixyay heerka siyaasadeed ee halganku maanta Marayo khaasatan arimaha gudaha sidoo kale waxaa lafalanqeeyay xaalada gumaysiga madoow ee indhabeelka ah.
Intaa kadib waxaa laguda galay qodabadii shirka loogu talagalay oo ahaa runtii kuwo midho dhalinkara Waxaana shirka lagasoo saaray go’aamo waxku ool ah
Waxayna xubnuhu iswaydaarsadeen afkaar aad u wanaagsan waxaana qodobada kamid ahaa aqoon korodhsi iyo su,aalo xubnaha dhaxdoodu iswaydiinayeen.
gabagabadii shirka ayaa kusoo dhamaaday
Guuul wuxuuna shirku
sooxidhmay abaarihii 12:00am ee wakhtiga Dhadhaab.